जनकपुरमा ‘महामूर्ख’ सम्मेलन हुने, १ जनालाई महामूर्खको उपाधि ! | Samabesi Khabar
जनकपुरमा ‘महामूर्ख’ सम्मेलन हुने, १ जनालाई महामूर्खको उपाधि !
जनकपुरधाम,२२ फागुन ।
जनकपुरधाममा महामूर्खको खोजी सुन्दा उटपटांग लाग्न सक्छ तर सत्य यही रहेछ । जनकपुरधाममा महामूर्खको अहिले खोजी भइरहेको छ । कुनै एकजनालाई यसपाली महामूर्खको उपाधि प्रदान गरिने छ ।
होलीसंगै जनकपुरधाम क्षेत्रमा आजभोलि सबैभन्दा बढी चर्चा कसैको छ त्यो महामूर्ख सम्मेलन हो । मिथिला नाटय कला परिषद मिनापको आयोजनामा जनकपुरधाममा प्रत्येक वर्ष हुने महामूर्ख सम्मेलन यसपाली पनि भव्य तयारी भइरहेको छ । साथै एकजना विशिष्ट व्यक्तिको खोजी पनि भइरहेको छ । व्यंग्यात्मक शैलीमा हुने सो कार्यक्रममा कुनै एक विशिष्ट व्यक्तिलाई यो उपाधि प्रदान गर्न गरिने गरिएको मिनापका अध्यक्ष परमेश झाले बताए ।
यसपाली प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, कांग्रेस नेता प्रदीप गिरि र पूर्व मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको नाउँ चर्चामा रहेको छ । यी मध्ये नै कुनै एकजनालाई महामूर्खको उपाधि प्रदान गरिने छ मिनाप स्रोतले जनाएको छ ।
जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा हुने सो महामूर्ख सम्मेलनमा गत वर्ष जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहलाई महामूर्खको उपाधि प्रदान गरिएको थियो । सो महामूर्ख सम्मेलनमा महामूर्खका अतिरिक्त अन्य व्यक्तिहरुलाई पनि विभिन्न मूर्खको उपाधि प्रदान गरिने छ । बैशाखनन्दन, डपौरशंखको,लोढाशंकर ९मुर्ख०, मुसरीलाल, हराशंख, बज्रकीट, वोतलानन्द,, बंशकुरहरी, चपाटनन्दन, खेसारीलाल, मनतोरिया र जिलेविया मूर्खको उपाधी प्रदान गरिने छ ।
उपाधि प्राप्त गर्न सफल भएका व्यक्तिलाई बिभिन्न तरकारीसहितको माला पहिर्याइ गर्छन् भने ब्यंगात्मक तस्वीरसहितको चित्रकला पनि प्रदान गरिने तयारी भइरहेको छ । महामूर्ख सम्मेलनमा हजारो दर्शकहरू सहभागी हुने छन् । समारोहमा होलीको गीत एवं व्यंग्यात्मक कवि सम्मेलन समेत हुने मिनापका पूर्व अध्यक्ष सुनिल मल्लिकले बताए ।
जनकपुरधाममा २०६१ सालबाट महामूर्ख सम्मेलन हुँदै आएको छ । २०६१ सालमा महामूर्खको उपाधी मैथिली कवि नरेश ठाकुर, २०६२मा एमाले नेता शीतल झा, २०६३मा जनकपुरधाम नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर हरिबहादुर बिसी, २०६४मा सदभावना नेता ओमकुमार झा, २०६५मा बरिष्ठ साहित्यकार डा। राजेन्द्र विमल, २०६६मा पूर्व मन्त्री रामचन्द्र झा, २०६७मा नेपालका चर्चित राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल, २०६८मा साहित्यकार रामभरोष कापडि़ भ्रमर, २०६९मा सांसद रामसरोज यादव, २०७०मा राजपाका नेता एवं पूर्व सांसद डा। विजयकुमार सिंह, २०७१ मा नेकपा नेता एवं सांसद शत्रुधन महतो र २०७२ मा श्मसान घाटलाई स्वर्गद्वारा बनाएर चर्चा कमाउनु भएका पवन सिंघानियालाई महामुर्खको उपाधी प्रदान गरिएको थियो ।
महामूर्खको छनौट कसरी हुन्छ रु
जनकपुरधामको स्थानीय पत्रिकाहरु एक हप्ता पहिलादेखि नै को महामूर्ख बन्ने त्यसको नाउँमा चर्चा चलाएको हुन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष अनिल मिश्र भन्छन्, ‘महामूर्ख जनकपुरधामको एकटा लोकप्रिय कार्यक्रम रहेको छ त्यसलाई मिडिया क्यास नगर्ने कुरै आउँदैन । फेरी मिडियामा चर्चा भएपछि कार्यक्रको आकर्षण बढने गरेको छ । समान्यतया धेरैलाई लाग्नसक्छ महामूर्ख को बन्छ रु तर आश्चर्यको कुरो यो रहेको छ धेरै कामना गरिरहन्छ यसपाली म महामूर्ख बनु ।’
२०६५ सालका महामूर्खक उपाधि प्राप्तकर्ता एवं मैथिलीक बरिष्ठ साहित्यकार डा। राजेन्द्र प्रसाद विमल भन्छन्, ‘उपाधि प्राप्त गर्नु आफैमा ठूलो उपलब्धि रहेको छ, प्रेमले मानिस हरेकथोक अर्थात विषपनि पिउने गरेको इतिहास रहेको छ । यस्तोमा महामूर्ख पाउनु ठूलो कुरो हो । २०७५ सालका महामूर्ख लालकिशोर साहले महामूर्खको उपाधि प्राप्त गर्नुलाई उपलब्धिको रुपमा पाएको बताउनु भयो ।